Patty Pie ngeqanda kunye no-anyanisi
Uhamba ngeqanda kunye anyanisi
Iipayi ezibhaka kunye namaqanda kunye anyanisi eluhlaza La mabala asekuhlaleni afukisele ukufika kwehlobo-i-anyanisi ngobuninzi kunye noonwabo oluhlaza okonkcenkceshe, ukuvumela umntu ohlala ekhaya ukuba athabathe iintsiba zakhe ezintle. Ngoku ezi zi-pie zingabhaka unyaka wonke, ukuthenga anyanisi, kunye neminye imifino, kwisebe lemifuno. Ukuzaliswa kwee-anyanisi kunye namaqanda athile ngenye yeenqweno kwiintsapho zethu, ndandisa ubusika bayo ngokufaka ibhotela okanye i-oyile yemifuno, i-spiciness - i-cheated grese.
Ngqolowa Ukhula 1.5 kg
Amanzi 300 ml
Ushukela 60 g
Ityuwa 20 g
Imvubelo eyomileyo 10 g
Amaqanda inkukhu 7 amaqhosha.
I-cheese nzima 10 g
Inyathelo 1 Ukulungiselela inhlama, thabatha umgubo, umxube wobisi kunye namanzi, ityuwa, iswekile, iqanda, imvubelo eyomileyo, ioli yelanga.
Inyathelo 2 Ukuzaliswa kuya kufuna amaqanda, u-anyanisi eluhlaza, ibhotela, ushizi, ityuwa.
Inyathelo 3 Lungisa i-spoon. Hlanganisa ubisi ngamanzi afudumeleyo. Yongeza ityuwa, iswekile, ibhotela, iqanda kunye nomgubo ocolekileyo oxutywe nemvubelo eyomileyo. Faka kwindawo efudumeleyo, ehlanganiswe nge-napkin.
Inyathelo 4 Xa i-opara iphakama kwaye iqala ukudubula - yonke into iya kuhamba kunye nemibhobho emininzi yomoya, yongeza yonke ingqolowa ehlanjwe kuyo.
Inyathelo lesi-5 Mxolela inhlama ukwenzela ukuba ibe yinyani kwaye ayinamathele ezandleni.
Inyathelo 6 Valeka ngesikhwama seplastiki - kulungele kakhulu ukuphamba ngqo kuyo-kusuka phezulu ngenelulini, ufake kwindawo efudumeleyo ukuya kuyo. Emva kweyure inhlama iya kuvuka, kufuneka ibethe ize iphinde ishiywe iyure.
Isinyathelo 7 Okwangoku, pheka amaqanda aphekiweyo.
Isinyathelo 8 Landa amaqanda, cima igobolondo.
Isinyathelo 9 Gaya amaqanda ngemfoloko.
Inyathelo 10 Hamba ngokukhawuleza i-anyanisi eluhlaza.
Inyathelo 11 Hlanganisa ibhotela kunye noshizi osiweyo kwiiqanda ezigayiweyo.
Inyathelo 12 Hlanganisa uze ungeze anyanisi ocolileyo.
Inyathelo 13 Gqugquzela umhlaba ukuba uhambisane ngokufanayo.
Inyathelo 14 Beka intlama ephakamileyo kwithebula okanye ibhodi, ngokugqithisa izandla ngeoli kunye nemifuno - andiyikusebenzisa umgubo wokuthungca (njengokuba benza empumalanga), iyakusindisa ekutsheni xa kutshaya. Phuma inhlama enezintambo, ezinqunywe zibe malunga neendawo ezifanayo - Ndiyathanda amancinci amancinci.
Inyathelo 15 Ukukhupha isahluko ngasinye ngepini yokuhambisa.
Inyathelo lesi-16 Yenza i-patties kwaye uyibeke phantsi kwiphepha lokubhaka kwi-baking iphepha. Gcoba ubuso bomhlaba ngeqanda elibethiwe.
Inyathelo 17 Makuvuke bese ubhaka ehovini elifudumele malunga nemizuzu engama-30.
Isobho se-Potato cream
Inkukhu yekhukhu kunye namakhowe
Indlela yokusebenzisa imilenze ephakathi
Amadoda afanelekileyo kwi-horoscope
UMaxim Galkin wakhumbuza ababhalisile beqhawe lefilimu "into e-5", umfanekiso
I-Biography ka-Anna Pavlova
AmaFayili oMkholo uBrazhneva akrokrelwa ukuba ukhulelwe
Iibhonsi kunye nembewu yamatope
Amabali ama-5 amava ayenzeka kubantwana beenkwenkwezi
Ukutya kwi-syndrome ekhubazayo
Indlela yokunciphisa inkqubo yokuguga kwaye uhlale uselula
Izitya zokuqala kunye nezolisayo kuMnyaka omtsha
Ingaba kunokwenzeka ukwenza izinto ezincinci ezinokubonga ezinjengezamehlo
IHoroscope ngo-Eva wonyaka omtsha: sisilindelwe ntoni ngo-Disemba 31?
Imveliso yeMango: Iimpawu ezifanelekileyo